July 2014 – Ministry of Education in Puntland
July 27, 2014 / News
Wasiirka Waxbarashada dowladda Puntland Cali Xaaji Warsame oo tababar usoo xiray 170 macaliin wax ka dhiga dugsiyada sare.
26/07/2014, Wasiirka Wasaradda waxbarashada ee dowladda Puntland Cali Waaji Warsame ayaa maanta tababar usoo gabagabeeyay 170-macalimiin ah oo mudo Bil ah tababar uga socday xarunta tababarka macalmiinta ee GTEC ee Garowe. […]
Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo tababar usoo gabagabeysay gudiga tayo dhowrka waxbarashada.
26/07/2014 , Wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland ayaa maanta tababar u soo gabagabeysay 50 qof oo isugu jiray maamulayaasha heer gobol, heer degmo iyo kormeerayaasha waxbarashada Puntland. Tababarkaan oo ay fulinaysay hay’ada […]
Gudoomiyayaasha Waxbarashada Gobollada iyo Degmooyinka Puntland oo maalintii 7-aad Tababar uga soconayo xarrunta Wasaaradda Waxbarashada Puntland.
22/07/2014,Xarrunta Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Puntland Waxaa maalinkii 7-aad ka soconaya tababar loo qabanyo Gudoomiyayaasha Waxbarashada Gobollada, Degmooyinka iyo Kormeerayasha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Puntland. Tababarkaan oo socondoona muddo 12-maalmood ah […]
July 20, 2014 / News
Wasaaradda Waxabarshada Puntland Waa ina Aradayda laga Tallaalo Cudurka Dabaysha ?.
20/07/2014, Dowladda Puntland ayaa shaacisay in xaalad deg deg ah oo ka hortag ah la galiyay xanuunka dabeysha oo lagu arkay dad qaba cudurkaan deegaano katirsan gobolka Mudug sida Jariiban iyo […]
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta Puntland oo furay Saxitaankii Imtixaanka fasalada 8-aad ee dugsiyada Puntland
Macalimiin kenya University ka socday oo Wasiirka Wasaaradda Waxbarashadda la kulmay( photo news)
Wasiirka Waxbarashada Puntland oo tababar ufuray 63 kamid maamulayaasha dugsiyada sare ee Puntland.
73-Maamule iyo Maamule ku xigeeno Dugsiyada Sare ee Puntland oo Garowe loogu soo xiray Aqoon is-waydaarsi
Tababar kor loogu qaadayo Akhris-Qoris la’aanta Caruurta oo ka dhacay Wasaaradda Waxbarashada Puntland.
Tababar Afar Maalmood soconayey oo Gaalkacyo lagu soo xiray.(EMIS)
Safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya Ambassador Marcelli oo booqday Wasaaradda Waxbarashada Puntland.
Wasaaradda Waxbarashada Puntlad oo shahaadooyin gudoonsiiyay 50 macalimiin ah oo ka socday xarumaha waxbarashada Dadban.
Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee puntland.
Wasaaradda Waxbarashadda Dowladda puntland 73 Maamule iyo Maamule ku xigeenada Dugsiyada Sare ee Puntland oo tababar u furtay.
Dowladda Puntland oo sheegtay in xukuumada federalku weli hor istaagan tahay aqoonsiga shahaadada Puntland.
Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo tababar ufurtay in kabadan 170 macalimiin ah oo wax ka dhiga dugsiyada sare.
Wasaaradda Waxbarashadda puntland oo qabatay aqoon kororsi ku aadan habka Ururinta,Maaraynta xogta Waxbarashadda Puntland.